सावधान ! हतार हतारमा यौन सम्पर्क गर्दा हुनसक्छ यस्तो खतरा - pnpkhabar.com
You are at:Home»स्वास्थ्य/जीवनशैली»सावधान ! हतार हतारमा यौन सम्पर्क गर्दा हुनसक्छ यस्तो खतरा
सावधान ! हतार हतारमा यौन सम्पर्क गर्दा हुनसक्छ यस्तो खतरा
By रिता घिसिंग on ३० पुष २०७४, आईतवार ०५:१३ स्वास्थ्य/जीवनशैली
यौन जीवनका बारेमा विभिन्न अध्ययनहरु भएका छन् र हुदैछन् पनि, ती अध्ययनहरुबाट यौनका बारेमा नयाँ-नयाँ कुरा पत्ता लाग्छ र लागी रहेको पनि छन् । केही महिना अगाडि गरिएको एक अध्ययनबाट युवतीलाई कसरी यौन सम्पर्क राख्नका लागि सहमतीमा ल्याउने बारेमा पत्ता लागेको छ ।
सम्भोग सुरु गर्नुअघि यौन उत्तेजना बढाउन गरिने विभिन्न यौन क्रियाकलाप प्राक्कक्रिडा फोर प्ले गर्ने गर्नुपर्छ । यौन क्रियाकलापलाई सुमधुर वनाउन गरिने कुनै पनि पूर्व क्रियाकलाप जस्तै रमाइलो वातावरणमा गरिने भोजन, प्रेमवार्ता, सृंगार र सयुक्त ठट्टालाई पनि प्राक्कक्रिडा भनिन्छ ।
तर कतिपय मानिसहरु एकैचोटी सम्भोग गर्छन । यसो गर्दा पुरुष तथा महिलाको यौनप्रतिक्रिया चक्रमा भएको भिन्नताले दुवैमा चरम यौन आनन्द पाउन गाह्रो हुन्छ । यौन सुख लिने क्रममा तालमेल मिल्दैन । यथोचित प्राक्कक्रिडामा संलग्न हुदा यौन अनन्दलाई यसको चरम विन्दुमा पुर्याउन मद्दत गर्छ
प्राकक्रिडामा संलग्न हुदा एक अर्काको शरीर, उसका संवेदनशिल अंगका बारेमा थाहा हुने मात्र होइन, दम्पतीबीच एक आपसमा कुराकानी हुने र एक अर्कालाई राम्ररी वुझ्ने अवसर पनि मिल्छ । आपसी समझदारी बढाउन मद्दत मिल्छ ।
यहि आपसी सम्झदारीले नै वैवाहिक जीवन उच्चतम रुपमा सफल हुन्छ । यसका लागि यौन प्रतिक्रिया चक्र र संवेदनशिल अंगका बारेमा थाहा हुनु पर्छ ।